“आज हामी ९ नं जिल्लाको एकता भेला सम्पन्न गर्न गैरहेका छौँ, अब प्रमुख अतिथि २–४ मिनेटमै आइहाल्नु हुन्छ, त्यसअगाडि अनौपचारिक छलफल चलाऔँ की ? कमरेडहरू…….” कमरेड दिपीकाले उद्घोषण गरिन् ।
“२–४ मिनेटमै आउने भए प्रतिक्षा गरौँ, उहाँ आएपछि नै ठिक हुन्छ होला नी !” कमरेड सुयोधनले धैर्य गर्न आग्रह गरे ।
“समयको सदुपयोग गराँै भन्नु भएको होला नी उद्घोषक कमरेडले । समयका हिसाबले त्यो त राम्रो हो तर नेता उपस्थित औपचारिक बैठकमा राखेको कुरो त सुनिँदैन भने नेतै नआएको बेलामा र अनौपचारिक समयको कुरो कसले गम्भिर रूपमा लेला र कमरेड ?”कमरेड प्रेमप्रसादले तर्क राखे ।
“समयको सदुपयोग ठिक ढङ्गले गर्ने भए चुट्किला, गजल, कविता वा गीत छन् भने राख्न ठिक होला नी !” कमरेड विनोदले सझुाए ।
“ल अब प्रमुख अतिथि गेटबाट छिर्दै हुनुहुन्छ कमरेडहरू, कर्तलध्वनीका साथ तालि दिनु होला….” उद्घोषक कमरेड दिपीकाले उर्दी गरिन् ।
“कामरेडहरू अब कार्यक्रम शुरु गर्ने की …….?” मञ्चमा बसेका कार्यालय सदस्यलाई प्रमुख अतिथिले आदेश दिए ।
“कामरेड हामी यो घ नं प्रदेशको ९ नं जिल्लामा पार्टी एकता भेला गर्न गैरहेका छौँ । आज हामीले प्रदेश इन्चार्ज स्वयम्लाई नै प्रमुख अतिथि पाएका छौँ, अब म कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन कामरेड विभिषणलाई अनुरोध गर्दछु ।”उद्घोषकले कार्यक्रम शुरु गरिन् ।
“हामीले यो पार्टी एकता प्रक्रिया अभूतपूर्व रूपमा सम्पन्न गर्दैछौँ, १० समूहका नेता एक ठाउँमा भएका छौँ । दुश्मन तिल्मिलाएको छ । पार्टीले एउटा महत्वपूर्ण आयाम थपेको छ । कार्यकर्ता उत्साहित बनेका छौ । यस्तो बेलामा उपस्थित प्रमुख अतिथि, अतिथि तथा सहभागि कामरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु ।” कामरेड बलरामले स्वागत भाषण गरे ।
“हामीलाई केही कुरा राख्ने अवसर हुन्छ कामरेड, सहभागि मध्येबाट कामरेड शुदर्सनले जिज्ञासा राखे ।
“प्रमुख अतिथि कामरेडबाट उद्घाटन भएपछि पार्टी एकता प्रस्ताव राखिनेछ । त्यसलाई पारित गरेर हामी छलफलमा जानेछौँ ।” प्रमुख अतिथिको अनुहारतर्फ हेर्दै उद्घोषकले जवाफ दिन खोजिन् ।
“ल अब उद्घाटन तर्फ लागौँ, कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन म प्रमुख अतिथि कमरेडलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।” उद्घोषकले अनुरोध गरिन……, प्रमुख अतिथि कामरेड बलभद्रले दीप प्रज्वलन गरे ।
“त्यसैगरी अब म पार्टी एकता सम्बन्धी विशेष प्रस्तावका लागि कामरेड नविनलाई अनुरोध गर्दछु …….” उद्घोषकले आग्रह गरिन् ।
“कामरेडहरू हामी इतिहासको असाध्यै संगिन मोडमा छाँै, दुश्मनले ठूलो घेराबन्दि गरेको छ, हामी फुटेर होइन जुटेर मुकाबिला गर्न एक ठाउँ उभिनु परेको छ, अब हाम्रो अगाडि एकताको विकल्प छैन……., त्यसैले यो विशेष प्रस्ताव पास गरौँ ।” कामरेड रनबहादुरले अनुरोध गरे ।
“अब म संगठनात्मक प्रस्ताव बारे कामरेड दीर्घराजलाई केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु ।” उद्घोषक कामरेडले आग्रह गरिन् ।
“हो, हामीले यतिबेला १० समूहलाई एउटा बनाएका छौँ, ती मध्ये ५ समूहका प्रतिनिधि हामी छौँ, सबै समूहका जिल्ला प्रमुखहरू स्वतः कार्यालयमा रहने र माथिल्लो कमिटीका कामरेडहरू पनि कार्यालयमा रहने गरी जिल्ला कार्यालय बनाउने प्रस्ताव छ, त्यसपछि हामीले ७५ सदस्यीय सचिवालय बनाउने सोच गरेका छौँ भने ४९९ को जिल्ला समिति घोषणा गर्दैछौँ ।” कामरेड दीर्घराजले प्रस्ताव राखे ।
“मेरो नम्बर घट्दैन भने एउटा कुरो राखुँ कमरेड, मनलाई थाम्न नसक्ने भएँ, कृपया समय दिनुस्…….” कामरेड हरिप्रसादले समय मागे ।
“नेताको आलोचना गर्दा कर्केनजरमा परिन्छ की परिन्न कामरेड, कृपया प्रमुख अतिथिले बताइदिनुहुन्छ की ?” कामरेड भुवनले जिज्ञासा राखे ।
“यो राजनैतिक प्रस्ताव अपुरो छ भन्न पाइन्छ की पाइँदैन कामरेड….।” कामरेड बलबहादुरले सोधे ।
“यो सांगठानिक प्रस्ताव शास्त्रिय र जडसुत्रवादी भन्न मिल्छ की मिल्दैन कामरेड …..? कामरेड हुतराजले जिज्ञासा थपे ।
“कामरेडहरू धैर्य गर्नुस्, प्रश्न पछि गर्नुहोला । यहाँ धेरै कुरो आउन बाँकी छ, स्पष्ट भै हाल्नु हुन्छ नी……!” उद्घोषकले सम्झाउन खोजिन् ।
“खोइ त जनतासँग एकताको कुरो ? खोइ त जननिगरानी गर्न लायक पार्टी बनाउने कुरो ? खोइ त नयाँ बनाउने र नयाँमा बदलिने कुरो …..? केही त ठोस आउनु प¥यो नी कामरेडहरू……।” कामरेड भुवनले जिज्ञासा दोहो¥याए ।
“हो, कामरेड तपाईहरूका जिज्ञासा सान्दिर्भक छन् र निकै पेचिला पनि । तपाईहरू कतिपयले कुरो राख्नुभयो र निकै गहिरो संकेत पनि गर्नुभयो । मैले बुझिहाले । यस्ता प्रश्नको उत्तर हामी माथि पनि खोज्दैछौँ । उत्तर माथिबाट मात्र आउँदा विगतमा राम्रो भएन….। तलबाट आएका पनि राम्रा हुन सक्छन्….कृपया पार्टी बदल्ने कुरामा र जनतासँगको सम्बन्ध बनाउने कुरामा सुझाव दिनुस्….। मैले कुरो पु¥याउँछु …।” प्रमुख अतिथि कामरेडले एकमुष्ट सम्बोधन गरेपछि सहभागीहरू थोरै चिसिए ।